Waa maxay fikradaha horey loo qabay (Preconceived Ideas) ? – Kaasho Maanka
Waa maxay fikradaha horey loo qabay (Preconceived Ideas) ?
W/Q: De Mooge
Qaybta: Aragtiyo, Cilmu-nafsiga
Waa adigoo iska raaca oo iska daba gala fikrado horey loo qabay, waxna iska weydiinin sax iyo qalad fikirkaas kaa horreeyay oo horay loo soo qaatay, kaasoo ay fikireen dad kaa horreeyay Kuna jaan-gooyeen habkii xilligaas ay u fikirayeen, ugu dambeyn ay dhaqan galiyeen bulsho joogtay goob gaar ah iyo waqti gaar ah.
Dadka Soomaaliyeed midda ugu daran ee heeysato ayaa ah in waxkasto iska qaataan xitaa kuwa tagay ee ku nool dalalka dibadda ee la kulmay bulsho leh dhaqamo kala duwan. Qofka Soomaaliga meel kasto uu joogo wuxuu ku adkeeystaa inuu yahay qofka ugu fiican ee leh dhaqanka ugu wanaagsan adduunka. Iyadoo taas jirto ayaa waligiisa uu waxba iska weydiinin dhaqankaan uu xambaarsan yahay, ma mid sumeeysan baa mise waa dhaqan caafimaad leh?
Tusaale, dadkii naga horeeyay ee Soomaaliyeed waxay sheegi jireen ilaa haddana ay ku hadaaqaan in dhaqanka Soomaalida uu yahay mid suuban dadkana ay yihiin kuwa leh qab.
Hadaba preconceived ideas waa marka aadan waxbo iska weydiinin wax kasto laguu sheego oo xambaarsan aragti la rabo inaad dhaqan galiso sax iyo qalad labada. Sida aan kor kusoo sheegnay ee dhaqanka suuban Soomaalida iyo inaan nahay dad qab leh, bal ma is weydiisay arrintaas maxaa ka run ah?
Adigoo is ogeyn ayaa wax iska naceeysaa, sababta waa inaad iska daba gashay oo iska raacday hadal nin kaa horreeyay uu yiri, wuxuu naco waa la naceeysaa, wuxuu jecel yahay waa la jeclaanaysaa.
Tusaale, dhaqanka Soomaalida wuxuu mowqif adag ka qaatay haweenka isagoo aad u liido sababtana waxaa waaye in markii dhaqankaan sumeeysan (toxic culture) la sameenayay ay sameeyeen niman joogay waqti adduunka dhan aad looga necbaa dumarka. iyadoo
rumeeysnaa in naagaha aysan lahayn karti ay ugu qeyb qaataan howlaha kala duwan bulshada. Balse maanta la arkay kartida dheddiga ay u leeyihiin inay qabtaan howlaha nimanka qaban jireen taas oo ugu horeeyso inay noqoto madaxweyne islamarkaasna si hufan ugu soo baxdo wixii loo igmaday.
QORMO LA XIRIIRTA: Islaamka ma oggol yahay xorriyadda fikirka ama caqiidada?
Soomaaliya waxay kamid tahay dalalka adduunka ugu liita dhan kasto, sida ammaanka, dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada, ogoow soomaalida waa dad odeyga ama raga taliyaan(patriarchal society) dhib kasto dalka ka dhacay waxaa sababay niman, odey dhaqameed, wadaad iyo waranle oo dhammaan ah niman, kuwaas oo markasto ay ku dhex jiraan shisheeye, ma yihiin nimanka soomaaliyeed kuwo leh karti? hadana waxaa arkaysaa qof kasto inuu ku qeylinaayo waxaa nahay bulsho sharaf leh ( honor society). Aqristoo aan ku weydiino ma nahay bulsho sharaf leh mise fikir naloo meeriyay aan waxbo aanan iska weydiinin sax iyo qalad oo odayaal naga horreeyay afka noo galiyay (Preconceived ideas) miyaa?
Wixii qalday sax wixii aan ka tagay adiga ku dar.
dhaqanka soomaaliga waa kan ugu xun dhaqamada xilligaan.
Did u habaynta diinta Islaamka
W/Q: Cali Barre
Qaybta: Aragtiyo, Diinta Islaamka, Quraan
Wax badan baa laga dhahay malmahaan “dib-u-ahabeenta islamka” si looga hortago aragtiyada kooxaha mayalka adag sida daacish. Fahanka muslimiinta maanka-furan sida muslimiinta cillmaaniga ah ee ku dhisan in quraanka iyo axaadiista la siiyo macno cusub, waa mid aan wax badan kaga duwaneen kan kooxaha mayalka adag. Macno cusub siinta ayadaha quraanka iyo axaadiista, oo ah isla game-ka ay kooxa...
W/Q: Axmed Xanafi
Qofka muslimka ahi wuxuu arkaayaa qof reer galbeed ah oo leh waxaan qaatay diinta islaamka isagoo ka daba cel-celnaaya wadaad muslim ah oo wadamada galbeedka jooga shahaadateynka si culays ku dheehan yahay. Arrinkaa wuxuu u arkaayaa guul islaamka u soo hoyatey, qofkaa soo islaamayna waxaa loogu yeerayaa inuu yahay qof cilmi badan, qof xaq raadis ah, qof baaritaan sameeyey, qof hufan, qof damiir...
Waa maxay sababta keentay maqnaanshaha wax-abuurka bulshooyinka muslimiinta
W/Q: Maigag Guled
aqtigan aynu joogno marka aad eegto adduunka iyo heerka wax soo-saarka bulshooyinka ee kobociisu xawaaraha ku socdo maalin walbana samaynayo daahfurro baaxad wayn oo la xiriira tiknoolajiyada, caafimaadka, sayniska, hawada, militariga…iwm waxaad dareemaysaa in lagaa tagay oo aad kaligaa fadhidid qol madaw oo laga guuray waa hore, waxa kaliya ee qolkaa looga dhex tagayna yahay buug ku qoran...
Qaybta: Aragtiyo, Diinta Kiristaanka, Nabi Ciise, Sooyaal
Dadka waa la tabobari karaa qof ahaan iyo bulsho ahaanba. Waa run oo dadka waa laga xorayn karaa khuraafaadka iyo diimaha liita. Khuraafaadka iyo diimuhu dadka waxa ay ka dhigaan wax xayawaanka ku dhaw oo maskax qufulan oo aan dareen iyo aragti dheer lahayn. Waddamada maanta laga soo raadsado xuquuqda iyo nabadgelyada oo badaha loo jiiro in la soo cagadhigaa waxa ay haysan jireen khuraafaad...
Shan boqol oo waji oo kun indhood leh haddii qof hadlaya xaggiisa loo jeediyo wuxuu qofkaasi joogaa ”Ilgayr”, waxaana aad u badan in dadku markii ay ilgayr ka hadlayaan ay dareemaan dhibaatooyin iyo culaysyo aysan dareemeen haddii ay saaxiibbadood gaar ula hadlayaan.Dhibaatooyinkaas uu qofka ilgayrta ka hadlayaa dareemayaa waxay sii daran yihiin haddii uusan qofku weligiis ilgayr ka hadlin. Waxaa...
W/Q: De Mooge 22nd May 2020
Maxay Soomaalidu Diinta si gaar ah ugu jecel yihiin?
Wadaadadu waa fulayada fikirka